Madaxbanaanida Kosovo! Somaliland ma ku xigtaa? | Arimaha Bulshada
February 23, 2008 at 6:50 pm | Posted in maqal | Leave a comment
Doorka Ciyaar-siyaasadeedka Reer Yurub ee madaxbanaanida Kosovo wuxuu la mid-yahay Doorka Midawga Afrika ee Somaliland!
Hargeysa (Ogaal) – Gobolka Kosovo ayaa la rajaynayaa inuu ku dhawaaqo madaxbanaanidiisa maanta oo Axad ah.
Isla markaana warbixin ay soo saareen ururka xuquuqal iinsaanka ayaa lagu sheegay in Somaliland ay haysato 55% ilaa 70% fursadda aqoonsiga madaxbanaanidooda.
Marka loo eego warbixintan, Gobollada Wales iyo Scotland ayaa iyana fursado sare u haysta inay ku guulaystaan ka goítaanka Boqortooyada Ingiriiska.
Sidaa waxa warbixin dheer oo uu shalay faafiyay ku bilaabay Wargeyska ka soo baxa dalka Itoobiya ee Jima Times.
Iyada oo warbixintaas aanu soo koobnay waxay u dhignayd sidan:
“Kosovo waxay si aad ugu dhaw qarka ugu saaran tahay ku-dhawaaqiddan taariikhiga ah ee madaxbanaanida.
Calanka casaanka ah ee dadkan Albaaniyaanka ah, ee ay ku sawiran yihiin gorgorka labada madax leh, ayaa ka babanaya meel kasta oo Gobolka Kosovo ah.
Dimuquraadiyada Somaliland ee hanaanka axsaabta badan, ayaa ah wax aad ugu yar Qaaradda Afrika, Dunida Muslimka, isla markaana Ururka Midnimada Afrika waxay u baahan yihiin inay si ilaa xad xaqiiq ah u tixgeliyaan dalabka rasmiga ah ee Somaliland ee ay ku doonayaan xubinnimada AU-da, si ay taas abaal-marin uga dhigaan rabitaanka dadka.
Madaxbanaanida Gobolka Kosovo, ee cabsida lihi waxay soo saartay suáalo fara badan.
Dadka badan ee suáalaha iska waydiinayay, waxa waydiimahooda ka mid ahaa; ‘Waa maxay sababta ay qarannimadu ugu haboon tahay dadka qaar, balse ay u baqdin gelinaysaa kuwo kale? Dhamaanba dedaallo ka dibna, miyaan xuquuqda aayo-ka-tashigu ahayn nuxurka dimuquraadiyada lafteeda? Sidee ayay reer Basque-hii Isbaanishku waddan ku noqdeen? Maxaase ka khaldan Jamhuuriyadda Dadka Vermont? Waxa iyana jira ugu yaraan laba dersin oo gobollo dhaqdhaqaaqyadoodu firfircoon yihiin oo gooni-isu-taag doonaya, kuna yaala Qaaradda Yurub keligeed, isla markaana kooxo gobollo madaxbanaani raadis ah ayaa caalamka ka jira.
Dhamaantood, waxay ku wax-goosanayaan ku-dhawaaqitaanka Axadda (Maanta) ee madaxbanaanida Jamhuuriyadda Kosovo.
“Waxaynu ku noolahay adduunyo ku salaysan qaramo,” sidaa waxa yidhi Dr Florian Bieber, oo ah barofasoor siyaasadda iyo xidhiidhada caalamiga ah ka dhiga Jaamacadda Ingiriiska ee Kent. Waxaanu intaa ku daray, “Qaramada Midoobay waxay ku salaysan yihiin qaramo bahoobay. Ururka Midawga Yurub waa qaramo bahoobay.”
Sidaa daraadeed, ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, “Way sii soconaysaa inay tan oo kale dhacdo.
Dalal cusub ayaa soo baxaya, isla markaana waddamo hore ayaa la waayayaa, sida Jarmalkii Bari oo kale.”
Isaga oo xidhan muraayaddihiisii (Badhasaabka Gobolka Vermont, oo Maraykanka si dadban u hoos-yimaada) indhaha, oo ay timihiisu cadaadeen, ayaa Barafasoorka dhaqaaleyahanka ah hawlgabka ah ee Jaamacadda Duke University waxa uu u muuqdaa sidii Benjamin Franklin, waxaanu suáalo waydiinaya Thomas Jefferson (Madaxweynihii Maraykanka).
Wuxuu aaminsan yahay haddii uu Gobolka Kosovo noqon karo dal madaxbanaan, markaa maxaa u diidaya inuu madaxbanaani helo Gobolka Vermont (Gobol si dadban uga tirsan Maraykanka, oo madaxbanaani doon ah), kaasoo madaxbanaani haystay tan iyo xilligii ay ku biireen midawga ah 1791-kii, markaas oo uu ahaa Gobolkii 14aad ee xorooba.
Tobanaan kun ayaa u dhintay qadiyadda mudada dheer qaadatay ee qarannimada Falastiiniyiinta, isla markaana dagaalyahan hubaysan ayaa qalabka u sita madaxbanaanida Gobolka Kashmiir, kaasoo ka hoos-baxa dalalka Hindiya iyo Bakistaan labadaba.
Reer Basques-ku waxay ku guulaysteen maamul-hoosaad ay ka qaateen Isbayn, laakiin dagaalyahan ayaa weli sii wada dagaal ay madaxbanaani buuxda ku doonayaan.
Jasiiradda ku taala Badda Mediterranean-ka ee Corsica, oo ah halkii ay ka soo jeedeen dhalasho ahaan Napoleon-kii, ayaa weli dadka u dhashay waxay cadaadisyo ku hayaan Faransiiska sidii ay uga madaxbanaanaan lahaayeen.
nkasta oo Maraykanka iyo dalalka furaha u ah xulufaddiisa oo ay ku jiraan Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalku taageereen gorgortanka Kosovo ugu jireen madaxbanaanidooda, ayaa haddana waxa si adag uga horjeestay Seerbiya iyo Ruushanka.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku adkaystay in haddii Gobolka Kosovo uu qaato madaxbanaanida iyada oo aanay aqbalaad ka haysanin Qaramada Midoobay, ay markaa noqonayso mid wajahaya jid khatar ah, oo dhiirigelinaya gooni-u-goosatooyinka Gobolka Chechnya, Georgia, Azerbaijan iyo kuwo kale.
Xisbiga Qaranka Scotland ayaa ku ballanqaaday in afti guud oo madaxbanaani ah dadweynaha laga qaadi doono sannadka 2010.
Inkasta oo coddayntu ay u muuqato mid aan dhacayn, haddana maaha taasi inaan laysku deyayn. Waxaanay taasi ku soo beegmaysaa ka dib 700 oo sannadood xilli laga joogo halgankii ay bilaabeen William Wallace iyo Robert the Bruce.
“Dhamaanba khibraddaha noloshayda aan u soo taagnaa waxay ii sheegayaan in madaxbanaanida Scotland ay noqon doonto mid lagu guulaysto,” sidaa waxa Tv-ga ciyaaraha ka yidhi Aktarka Filimada James Bond.
Dalka Biljimka ayaa la saadaaliyay inuu noqonayo dalka xiga ee kala daadanaya: Hirdanka qadhaadh ee u dhexeeya dadka ku hadla Luqadda Dhajka ee waqooyiga iyo kuwa koonfurta ee Luqadda Faransiiska ku hadla ayaa wararka badan ee soo baxayaa u badaniyaan inay boqortooyada Biljimka ku keenayso inay laba u kala jabto.
**Suurtagalnimada waqtiga gaaban inta uu boqolkiiba dalku ka madaxbanaananayo (ST) %
**Suurtagalnimada mudada dheer inta la rajaynayo inuu dalku sii madaxbanaanaanayo (LT) %
Gooni-isu-taag doon\_ Dalkii hore: ST % LT%
Falastiin\_ Israaíil 55 95
Waqooyiga Qubrus\_ Qubrus 30 – 45
Midoobay 90 + 95 +
Vojvodina\_Seerbiya 2 – 15 –